Falanqaynta bilowga ee dhaliyaha gaaska dejinta ciladda
Hawlgalka warshad koronto, qalabka korontada iyo matoorradu waa xiriiriyeyaal muhiim ah, kuwaas oo saameyn weyn ku yeelan kara awoodda koronto ee warshadda. Haddii awoodda korontada aysan ku filneyn, markaa wax soo saarka warshadaha ayaa ...
Maxay yihiin isticmaalka dhaliyaha gaaska
Maxay yihiin isticmaalka matoor gaas? Matoor dhaliyaha gaaska waa nooc ka mid ah qalabka dhalinta tamarta. Mabda 'u shaqeynteeda ayaa ah in mashiinku gubo gaaska, tamarta kuleylka loo beddelo tamar farsamo, iyo wareegga koronto-dhaliyuhu wuxuu wadaa ma ...
Sida loo isticmaalo koronto-dhaliyuhu si sax ah u hoos dhig
Adeegsiga qalabka koronto dhaliyaha ee xaaladaha adag ee deegaanka waxaa badanaa sabab u ah saameynta arrimaha deegaanka. Tallaabooyinka iyo hababka qaarkood waa in laga qaataa meelaha taagagga sare leh iyo xaaladaha cimilada qabow. Kuwa soo socda ayaa ah ...